Auction(Auction) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लिमिटेडले ३ लाख बढी संस्थापक समूहको सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बेच्ने भएको छ। बैंकले आउँदो भदौ १ गतेदेखि संस्थापक समूहको ३ लाख १६ हजार १५६ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको हो। विद्यमान संस्थापक तथा सर्वसाधारणले लिलामीमा राखेको सेयर खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा राखिने...
एनआईसी एसिया बैंकले सीआईटीको संस्थापक सेयर बेच्न माग्यो गोप्य बोलपत्र, कसले किन्न पाउँछ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (सीआईटी) को संस्थापक समूहको सेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत आज आइतबारदेखि बिक्री खुलाएको छ। बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुल १ लाख ६६ हजार ३२ कित्ता संस्थापक समूहतर्फबाट सेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री खुलाएको हो। यो...
एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ को लिलामीमा राखिएका ऋणपत्रमा आवेदन दिन आज अन्तिम म्याद
काठमाण्डौ । लिलामीमा राखिएको एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ को स्वामित्वमा रहेका १ लाख ७४ हजार इकाइ ऋणपत्रहरुमा आवेदन दिने आज बिहीबार अन्तिम दिन रहेको छ। एनएमबी बैंक लिमिटेड कोष प्रवद्र्धक तथा यसकम्पनी योजनाव्यवस्थापक रही एनएमबी म्युचअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ को स्वामित्वमा रहेका...
‘एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड १’ को विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्र आजदेखि लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेड कोष प्रवद्र्धक तथा एनएमबी म्युचअल फन्ड योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड १ को स्वामित्व रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीयको सेयर र ऋणपत्रहरु आज बिहीबारबाट लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री खुलाएको छ । एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड १ ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीयमा आफ्नो स्वामित्वमा...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नबिकेको संस्थापक सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बिक्री नभएको संस्थापक समूहतर्फको ९० हजार ५ सय ७१ कित्ता हकप्रद सेयर आज शुक्रबारदेखि लिलामीमा राखेको छ । कम्पनीले २०७५ चैत २८ गतेदेखि २०७६ जेठ १ गतेसम्म बिक्री खुला गरी आवेदन माग गरिएको संस्थापक समूहको २ लाख ४० हजार ५७१ कित्ता सेयरमध्ये बिक्री हुन बाँकी ९० हजार ५ सय ७१ कित्ता सेयर...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर सस्तैमा उठाउने मौका भोलिदेखि
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बिक्री नभएको संस्थापक समूहतर्फको ९० हजार ५ सय ७१ कित्ता हकप्रद सेयर शुक्रबारदेखि लिलामीमा राख्ने भएको छ । कम्पनीले २०७५ चैत २८ गतेदेखि २०७६ जेठ १ गतेसम्म बिक्री खुला गरी आवेदन माग गरिएको संस्थापक समूहको २ लाख ४० हजार ५७१ कित्ता सेयरमध्ये बिक्री हुन बाँकी ९० हजार ५ सय ७१ कित्ता...
ग्रामीण विकास लघुवित्तको ५.८२ लाख कित्ता सेयर सस्तोमै पाउने अवसर खुल्दै
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नबिकेको ५ लाख ८२ हजार ८४४ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । संस्थाले हालै आफ्नो चुक्त पुँजी ६५ करोड ५० लाखको ५० प्रतिशत अर्थात ३२ करोड ७५ लाख मूल्यबराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । संस्थाले रु. १०० अंकित ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोमा जम्मा २६ लाख ९२...
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले बिक्री नभएको २.४० लाख हकप्रद सेयर लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बिक्री नभएको २ लाख ४० हजार ५७१ कित्ता हकप्रद सेयर सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । कम्पनीले २०७५ चैत २८ गतेदेखि २०७६ जेठ १ गतेसम्म बिक्री खुला गरी आवेदन माग गरिएको संस्थापक समूहको २ लाख ४० हजार ५७१ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्न लागेको हो । लगानीकर्ताले साउन ३ गतेदेखि भदौ १० गतेसम्म गोप्य...
एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले नबिकेको ५.२९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गरेको हकप्रद सेयर पूरै बिक्री नभएपछि बाँकी रहेको सेयर इकाइ लिलामीमा राख्ने भएको छ । गत जेठ १४ गते एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरको बिक्न बाँकी रहेको ६.४४ प्रतिशत सेयर इकाइहरु लिलामीमा राख्न लागेको हो । कम्पनीले १ः३ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित दरका...
स्वावलम्बन लघुवित्तको ३ लाख ७७ हजार कित्ता संस्थापक सेयर असार ३१ बाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्था समूहतर्फकाट ३ लाख ७७ हजार ४५७.५ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । स्वावलम्बन लघुवित्तले संस्थापक सेयरधनी महिला सहकारी लिमिटेडको नाममा रहेको उक्त परिमाणको सेयर असार ३१ गतेबाट लिलामी खुलाउन लागेको हो । लगानीकर्ताले साउन २९ गतेसम्म लिलामी सेयर उठाउनका लागि शिलबन्दी...
भार्गव विकास बैंकले ७.५३ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा
काठमाडौँ । भार्गव विकास बैंकले हकप्रदमा विक्री नभएका ७ लाख ५३ हजार ७ सय ३० कित्ता शेयर लिलामीमार्फत् विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गरी लिलामीमा विक्री गर्न लागेको उल्लेख गरेको हो । बैंकका संस्थापकतर्फ ६ लाख ६७ हजार ७ सय ६ कित्ता शेयर बिक्री नभएका हुन् भने ८५ हजार ६ सय ६४ कित्ता शेयर सर्वसाधारण...
एक सयमै कामना सेवाका शेयर किन्ने अवसर
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंकले हकप्रदमा बिक्री नभएका शेयर हकप्रदमार्फत् बिक्री गर्न लागेको छ । बैंकले करीव ८ लाख ४९ हजार कित्ता शेयर लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो । १५ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेको बैंकले ६ लाख ३७ हजार ८ सय १६ कित्ता संस्थापक शेयर र २ लाख १२ हजार १ सय ४६ कित्ता साधारण शेयर लिलामीमार्फत् विक्री गर्ने लागेको जानकारी दिएको...